DHEGEYSO: Xogtii u dambaysay ee ciidanka lagu tababarayey Eritrea | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DHEGEYSO: Xogtii u dambaysay ee ciidanka lagu tababarayey Eritrea
DHEGEYSO: Xogtii u dambaysay ee ciidanka lagu tababarayey Eritrea
(Hadalsame) 03 Agoosto 2021 – Barnaamijka Galka Baarista waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay askarta Soomaaliyeed ee tababarka loogu qaaday dalka Eritrea ee soo baxsanaya oo sii kordhaya.
Galka Baarista waxa uu la hadlay askar dhowaan kasoo baxsatay dalkaas oo qaarkood soo gaaray Soomaaliya.
Dhinaca kale, xog uu helay Galka Baarista ayaa sheegeysa in dowladda Soomaaliya ay qorsheyneyso in dhallinyaradaas dib loo soo celiyo.
Waxaa barnaamijka soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Previous articleDAAWO: Ikraan Tahliil hooyadeed oo u ”dacwootey” hooyada dhashay Agaasimaha NISA, Fahad Yaasiin
Next articleSoomaali badan oo khalad ka fahamtey kaalinta uu galay orodyahan Cali Xasan (Wareegga xiga miyuu usoo baxay?)